Cumar Cabdirashiid Oo Sheegay Hal Arrin Oo Ay Ka » Axadle Wararka Maanta
Cumar Cabdirashiid oo sheegay hal arrin oo ay ka
Muqdisho (Axadle) – Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarkee ayaa si weyn u dhaliilay raafka ay Gobaladda Waqooyi ku billowday dadka kasoo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, kuwaas oo boqolaal ka mid ah shalay laga masaafuriyey magaalada Laascaanood.
Gobaladda Waqooyi ayaa dadkaas ku gurtay gawaari xamuul ah, waxaana sawirro lagu baahiyey baraha bulshada ee Internet-ka ay muujinayaan ganacsatadii Laascaanood ee ka soo jeeda koonfurta oo laga soo saaray magaaladaasi, iyada oo hantidoodii ay taal halkaasi.
Cumar Cabdirashiid ayaa tallaabada ay qaaday Gobaladda Waqooyi ku tilmaamay inay ka dhigan tahay meel aad u hooseysa oo anshax ahaan iyo siyaasad ahaan ay gaartay Gobaladda Waqooyi.
“Raafka qasabka ah ee lagu soo bandhigay Laascaanood waxay astaan u noqon doontaa meel aad u hooseysa oo ay Gobaladda Waqooyi gaartay anshax ahaan iyo siyaasad ahaan. In si qaldan bulsho loogu eedeeyo duruufaha ku hareereysan magaalada, ma dhallin doono xasilloonida la raadinayo, waxbana kama qaban doonto isbeddellada siyaasadeed ee hoose,” ayuu ku yiri qoraal uu soo dhigay Twitter.
Taliyaha booliska gobolka Sool ee Gobaladda Waqooyi ayaa shaaca ka qaaday in ay si gaar ah u beegsan doonaan dadka aan u dhalan deegaanadaasi ee ku sugan gobolka, wuxuuna tilmaamay in dadka kasoo jeeda Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ay ula midyihiin Itoobiyaanka iyo ajaaniibta kale, sida uu hadalka u dhigay.